Hodan - Qaybaha Koobaad iyo Labaad - Boga Wise Man
August 4, 2020 qawdhan
Hodan waxay is aragtay iyadoo soo jeeda. Sarriirteedii weynayd ee ay keligeed huruday ayay is rogtay laba jeer si ay u gaadho koomadiinka oo telefankeedu saarnaa.
Waxay eegtay saacada mise waa 01.30 AM.
Inkastoo ay berri tahay maalin Sabti ah oo aanay shaqo lahayn, todobaddii maalmood ee ugu dambeeyeyna ay aad u shaqaynaysay hadana hurdadii kumay ledin. Maxaa ka siya ayay is weydiisay.
Hodan waa 35 jir. Waxay ku nooshahay London waxaanay shaqo fiican ka haysataa Hay’adaha Dhaqaalaha ee Dawlada Ingiriiska, gaar ahaan kuwa Bangiyada maamulkooda iyo hubintooda u xilsaaran.
Hodan sariirta intay ka kacday oo jikada gashay ayay samaysatay koob shaaha markaasay moobilkeeda la fadhiisatay fadhigeeda cidlada ah, TV-gana shiday balse codka gaabisay. Waxay gashay twitter, waxaan nacaybkii iyo caydii ahayn way ku arki weyday. Facebook-eeda oo aanay beryahaa furin ayay gashay mise markiiba waa Jamaal oo la sawiran labadiisii carruurta ahaa iyo naagtiisii.
Hodan waxay dib u milicsatay wakhti uu Jamaal aad u jeclaa oo uu dhawr jeer guur ka dalbaday. Oo ay ugu jawaabtay waan yarahay oo iminkuun baan 21 jirsaday waxaan rabaa inaan nolosha meel ka gaadho.
Waxay isku dayday inay soo saarto facebook-ga uu leeyahay si ay u yara khaawisto. Wuu usoo bixi waayay waxay xasuusatay inay iyadu block saartay. Kadib facebook kale oo ay lahayd oo ay khaaawisaada dadkay block saartay u samaysatay ayay gashay oo ka eegtay.
Waxay aragtay Jamaal oo soo dhigay sawiro isaga iyo xaaskiisa iyo labadiisa carruura wiil iyo gabadh oo ciidii jooga meel doog leh oo Hargeysa duleedka ku taal. Sawirka wuxuu ku dulqoray “Ciid wanaagsan f&f”. Dhinacna way ka faraxday, dhinacna way ka murugootay. Siday kolba u fikiraysay ayaa la gaadhay salaadii subax.
Hodan waxay ahayd qof ku wanaagsan salaada. Intay tukatay ayay Alle weydiisatay inuu siiyo say wanaagsan.
Iyadoon laba saacadood wax ka yar uun jiiftay ayay saacadii ku qaylisay oo hurdada ka toostay. Way cadatay maydhatay, lebisatay, kafee samaysatay oo boorsadeedii qaadatay ayay albaabka ka baxday. Tareenka oo aan gurigeeda wax badan ka fogeyn ayay ku dhacday. Markii ay shaqadii gashay ayaa isla markiiba sidii caadada u ahayd waxay u gashay xafiiskii booskeeda iyadoo rabta inay kala hadasho riboodh uu rabay inay maalintaa keento oo wax ka dhinaayeen. Mise waa booskeedii James London oo dhididsan.
“Mr London are you okay?” ayay ku tidhi.
“Yes I feel a bit tired thank you” ayuu ugu jawaabay.
Hodan oo ahayd qof naxariis badan kamay dul tegin oo way sii yara waraysatay. Markaliya ayuu odaygii James oo da’diisu todobaatanka ku dhawayd hadal daayay. Islamarkiiba waxay garaacday numberkii gargaarka degdega ah dadkii kale xafiiskana way ugu yeedhay. Markii dhakhtarka looqaaday way u raacday iyadoo maalinta la joogtay illaa inta ay u imanaysay gabadh uu dhalay.
Hodan abaal weyn ayay u haysay oo odayga James wuxuu ahaa nin waxbadan baray oo dadku kala gobsane gob ahaa. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in uu wadnihiisu yara istaagay balse aanu ahayn xaalad khatara ee baxnaano dhakhtarka ah u baahanyahay muddo todobaad ah. Todobaakaa Hodan shaqada fasax ayay ka qaadatay oo maalinkasta way u tagi jirtay inkastoo uu fasaxay dhawr jeer hadana markuu uu taag waayay ayuu odayguna iska daayay.
James London wuxuu ahaa nin muhiim ka ah wadank Ingiriiska. Kana soo shaqeeyey hay’ado badan oo wadanku leeyahay sida Wasaarada Arrimaha Dibada, iyo Wasaarada Maaliyadaba. Waxa uu ahaa maamule aad loo ixitiraamo iyo mufakar kolkol wax qora oo taariikh yahanada iyo raga siyaasada caalamka u dejiya Ingiriisku talooyin ka qaataan.
Dadku markay dhiman gaadhaan waxweyn ayaa iska bedela. James maalmihii uu kasoo baxay shaqada fasax ayuu qaatay si uusoo fikiro oo illeen waa nin weyne geerida ugu diyaar garoobo.
Laba usbuuc ayuu fasax u tegay gobolka quruxda badan ee Faransiiska ku yaal ee la yidhaahdo Provence. Waxa uu inbadan is weydiiyey sababta Hodan ay u noqotay qofka keliya ee dartii fasax u qaadatay. Wiilkiisii Thomas dhawr saacadood ayuu la joogay, asxaabtiisii mid maalin fasax dartii usoo qaatay muu jirin. Rag badan oo meelo sare geeyey fariimo telefoon uunbay usoo direen iyo ubaxyo.
Maalintii uu kusoo noqdayba Hodan ayuu gaar ugu yeedhay isagoo u sheegay inuu dalacsiinayo oo mushaharkana u kordhinayo. Uma baahni bay ku tidhi. Wuu ka diiday isla habeenimadana wuxuu ku yidhi kaalay ii raac theatre-ka.
Habeenkii ayuu uga waramay inuu la yaabay naxariisteeda. Wuxuu u sheegay inay isu qaban la’dahay in maadaama uu aadka uga shaqeeyey inay hablaha iyada oo kale ah ee reer Afrika ay dhalmadoodu yaraato ay hadana iyadu tustay naxariis aanu asxaabtiisa iyo reerkiisa ka arag markuu xanuunsaday.
Iyadoo la yaaban ayay weydiisay waxanuu sheegayo. Intuu qoslay buu ku yidhi malaa waxaad isleeday dawooyinkaa maskaxdiisa wax u dhimay. Kaalay anaa kutusi buu ku yidhi. Gurigiisii bay tageen. Markaasuu fadhiisayay xafiis uu ku lahaa gurigiisa dhexdiisa. Wuxuu usoo saaray buug iyo qoraalo badan oo ku yidhi qaado soo akhriso.
Hodan akhriska waxay bilowday markii ay guriga soo gaadhay. Isla markiiba waxay aragtay in waxuu sheegayay ay wax ka jiraan balse qoraalada oo badnaa awgeed si fiican ugamay bogan.
Subaxnimadii ayuu hadana James xafiiskiisa ugu yeedhay oo yidhi qado ayaynu tegaynaa. Markaasuu sharaxaad labaad u galay. Isagoo u tilmaamayaa siday u fahmi lahayd aragtiyaha ku qoran qoraalada uu u gudbiyey.
Muddo bil ah markay akhriyeysay ayay ogaatay in wuxuu sheegayay ay tahay wax dhab ah. Hodan waxa ku dhacay jahwareer.
Waxbarashadeedii, shaqadeedi, nolosheedii iyo higsigeediiba waxay aragtay iyagoo ku qoran qoraaladii iyo buugtii James u dhiibay. Waxay ogaatay in nolosheediiba ay hayso dariiq niman buug kasii qoreen. Halkay ku dambaynaysaana tahay inaanay waxba dhalin oo reer yeelan ee noqoto shaqaale bes. Ujeedaduna tahay mid dhaqaale.
Iyadoo aad u xanaaqsan oo yaaban ayay subaxii dambe go’aansatay inay su’aalo weydiiso James oo indhaha kaga dhacdo bal.
Lasoco qaybta saddexaad..
hodan Jacayl London love professional Sheeko Somalia Somaliland Wakhti women
Previous Post Maxaa Haboon Inuu Dhaqaalaha Somaliland Ku Dhisnaadaa!
Next Post Hodan – Qaybtii Saddexaad